Zvipo zvinobva kumabheji
Paunosangana nemucheche zvinowanzopa zvipo. Iwe unogona kuita izvi nenzira dzakawanda. Vamwe vanoda kupa bheche duku uye envelopu nemari, vamwe pamusana pekuchenjera kwavo vanotenga zvipfeko zvakasiyana kana zvimwe zvinhu zvevana. Nhasi yakave yakashongedzwa kugadzira zvipo zvezvicheche kubva kune vana. Iyi sarudzo zvose zvisikwa uye zvinobatsira.
Zvipo zvevana vanozvarwa patsva kubva kumabheji: chii ichocho?
Makeke kana zvimwe zvifananidzo zvinobva kune vanonara vana ndezvakanaka uye zvisiri zvayo. Apo zvipo zvose "zvakavezwa" uye pfungwa yepakutanga haisati yauya mupfungwa, noushingi inopinda mukutsvaga zvose zvakakosha kuti zvigadzire zvipo kubva kune vakomana. Zvechokwadi, mazuva ano vazhinji vehodzi dzinopa zvifananidzo zvakagadzirirwa, uye mamwe mabhii evana akakwanisa "kusunungura mhepo" uye kupawo zvipo zvepakutanga. Asi kuti uite keke kana chimwe chinhu kubva kune vanocheka sechipo zvinogona kuitika pasina.
Chipo chakapi ichocho:
Nheyo yacho inoumbwa nemapuranga akaomeswa echepers anogadziriswa nearber bands;
iri pakati pekeki yemappers kana mamwe mifananidzo yakaisa kushamisika (izvi zvinogona kuva shampoo dzevana, zvigadzirwa kana zvimwe zvinhu);
uye shandisa zvipfeko zvevana, tirasi kana mabheji.
Ndezvipi zvipo zvinobva kune vakomana?
Zvinonyanya kuve zvikafu. Izvo zviri nyore kuita, kana uchishandisa mavara akasiyana, izvi ndezvekusarudzwa kwevose mukomana nemusikana. Kune vamwe vanhu vanodikanwa, kune dzimwe dzakawanda dzimwe pfungwa dzinonakidza.
Chipo chinobva pamappress kumusikana chinogona kuitwa mumhando yemaruva. Nheyo yacho inoramba ichinyatsofanana: tinoisa zvinhu zvose mumapumburu uye tinozvichengeta mumamiriro emhando. Pakati pezvipfeko unogona kuisa mashomanana emapfekete, uye kuwedzera maruva mashomanana uye mashizha ane mashizha. Ichange ichinyanya kufara nekugadzira.
Chipo chinobva kumabhedha kumusikana anowanzogadzirwa nenzira yepikicha kana bhasikoro. Magirafu anogadzirwa kubva mumapumburu anozivikanwa, uye fomu yacho pachayo inogona kuitwa kubva mubhokisi (iyi inogona kuva bhokisi rine kushamiswa) kana kuita kadhibhodhi frame.
Chipo chiri muchimiro chebhasikoro kubva kumabheji chinokodzera mukomana uye musikana. Zvakakwana kuti uise paari chiremba chakanakidza kana bhiza rinonakidza. Pamusikana uyu, unogona kupfekedza chigadziko nemiseve kana kuti matanda, zvaanogona kupfeka, uye kuti mukomana aronge bhasikoro nemabhaloni ane mifananidzo yemichina.
April 1 - Zuva reseka
Chipo chemusikana wemakore matanhatu
VaKaturike vanopemberera Krisimasi sei?
Kukwidzwa kwaIshe - nhoroondo yemutambo
Chipo kune shamwari yeNyika Idzva
Kudhindwa kwetafura yeGore Idzva
Zuva Renyika Dzevanhu Vakura
Ndeipi yekupemberera zuva rekuberekwa kwemakore gumi nemaviri romurume?
Sei chibereki chibereki chiro?
Tincture ye lilac yekurapa majoints - chiremba
Aloe vera juisi nokuda kwechiso
ChiDutch nzira yekukura mbatata
Vakadzi vekuvhara jekete nehood
Zvishandiso zvekushongedza zvipfeko
Kuchengetedza kwakaderedzwa zvigadzirwa
Nechii chokufuka jasi rebhuruu?
Moonshine kubva pagorosi - zviyeredzi zvakanakisisa zvewaini kumba
Mhemberero dzevakadzi dzakadzika-heeled
Minced nyama zvitsva
Nzira yekubika hove dzinochera pamba sei?
Chivi chemhosva iyi naChris Jenner vakava vasina pokugara
Jaji manheru manheru
17 chiedza chekuvhenekera chichibva mazai anogona kudyiwa pairi
Nzira yekugadzira sei imba yehuni kunze?
Zvakanaka sei kubvarura jeans yangu?